Yini i-Netnography? | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 8, 2020 NgoMsombuluko, Mashi 15, 2021 Douglas Karr
Nonke niyizwile imicabango yami umuntu wokuthenga futhi i-inki ebonakalayo yomile kulokho okuthunyelwe kubhulogi, futhi sengivele ngithole indlela entsha nengcono kakhulu yokwakha ama-personas womthengi.
I-Netnography ivele njengezindlela zokwakha ezisheshayo, ezisebenza kahle, nezinembile umuntu wokuthenga. Enye indlela yalokhu izinkampani zocwaningo ezenziwa online ezisebenzisa idatha yemidiya yokuxhumana nabantu esekwe endaweni (i-geotagged) ukuhlaziya ukuxhumana komphakathi kanye nezinto ezithandwa ngamakhasimende ngokususelwa endaweni echaziwe. Lezi zingxenyekazi zingenza abasebenzisi bakwazi ukuhudula irediyasi bezungeze noma iyiphi indawo abayikhethayo, futhi “bakhuhle” zonke izinhlobo zedatha kubantu abakuleyo ndawo.
I-Netnography igatsha le-ethnography (incazelo yesayensi yamasiko abantu namasiko ngamanye) ehlaziya indlela yokuziphatha kwabantu mahhala kwi-Intanethi esebenzisa amasu wokucwaninga ngezokukhangisa online ukunikela ngemininingwane ewusizo.
I-Netnography ihlanganisa iphinde ihlaziye idatha emayelana nokuziphatha kwamahhala kwabantu ngabanye kwi-Intanethi. Okusemqoka ukuthi le datha iqoqwa lapho abathengi beziphatha ngokukhululeka, ngokungafani nocwaningo olwenziwa lapho abathengi kwesinye isikhathi bephendula ukuvimbela ukuphoxeka noma ukujabulisa umhloli.
Ucwaningo lomthengi Imibiko yakhiwe ngemininingwane ephelele okuyizinkomba zangempela zendlela yokuphila, umkhiqizo, nokukhethwa komkhiqizo. Abahlaziyi bezocwaningo bahlanganisa imibiko bese benza iphrofayili yamasegmenti womthengi womkhiqizo noma wenkonzo yakho.
Kuyithuluzi elimangalisayo labakhangisi ngoba idatha ingahlanganiswa ngokushesha nangokunembile. I-Netnography kunenzuzo ngoba izinkampani zingenziwa ukuthi amaphrofayili azo ahlanganiswe ngokushesha kunokuba kuthathe amasonto noma izinyanga ukuqoqa ucwaningo. Lowo umehluko omkhulu ocwaningweni lwendabuko kwesinye isikhathi olungathatha izinyanga ukuluhlanganisa nokuluhlaziya. Ngesikhathi uthola lolo hlobo locwaningo, umuntu wakho womthengi kungenzeka ukuthi usevele ushintshile kancane. Noma ngisho okuningi.
Ngakho-ke, khona manjalo, uyazi ukuthi obani abathengi bakho abanenzuzo enkulu, ukuthi yini abanentshisekelo kuyo ngaleso sikhathi, nokuthi baxhumana kanjani nontanga yabo futhi kanjani.
Lolu hlobo locwaningo lomuntu luletha idatha ebucayi mayelana namakhasimende akho anenzuzo enkulu kufaka phakathi imali engenayo yasekhaya, ubuhlanga, amaphuzu okubuhlungu, izinhloso, amathonya, imisebenzi / izinto zokuzilibazisa, nokuningi. Le mibiko ingakutshela nokuthi yimaphi amawebhusayithi noma ama-brand umuntu ngamunye angasebenza nawo kanye namagama ayisihlanu aphezulu ongawasebenzisa ukuze ufinyelele kuwo.
Uma unentshisekelo yokuthengela amakhasimende akho umbiko we-Netnography, sicela ngithinte.
Tags: umuntu wokuthengaethnographysibhabhaucwaningo lomuntuumuntuURobert Kozinets
Thuthukisa Amandla Wokusesha Wangaphakathi Wendawo yeWordPress nge-Advanced Search kaJetpack